Ny Samsung Gear S4 dia hitantana amin'ny OS OS fa tsy amin'ny Tizen | Androidsis
Nandritra ny taona maro, ny orinasa Koreana dia nanomboka niloka tamin'ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny rafitra fiasany manokana antsoina hoe Tizen, rafitra fiasa izay misy ihany koa amin'ny sasany amin'ireo finday avo lenta avoakany eny amin'ny tsena any amin'ireo firenena vao misondrotra, ankoatry ny fahitalavitra mivarotra .
Ny kinova farany an'ny Tizen ho an'ny fitaovana Gear dia tsy manome fampisehoana mahatalanjona fotsiny, zavatra iray izay mijaly OS, fa manome antsika fanjifana bateria tena tery ihany koa, iray amin'ireo olana lehibe amin'ny OS OS. Saingy hoy i Evan Blass, ny Gear S4 manaraka dia tsy hotantanan'i Tizen, fa kosa amin'ny OS OS.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana atolotry ny rafitra fiasa roa dia voaporofo tsara ary ny antony tokana hanirian'i Samsung hanao risika amin'ny fananganana WearOS amin'ny findainy dia ny hoe Google no ao aoriany ary mandray ny vokany.
Toa tsapan'i Google fa ny fiaraha-miasa amin'ny LG hanombohana Smartwatches dia hadisoana fa tsy noho izy ireo fitaovana ratsy, izay amin'ny ampahany izy ireo, fa satria ny mpanamboatra tokana manerantany dia Samsung, satria misy ny finday avo lenta indrindra mpanamboatra eto amin'izao tontolo izao.
Ankoatr'izay, ny orinasa Koreana dia mizara amin'ny firenena rehetra manerantany, zavatra iray izay tsy azon'ny Google ifaninanana raha toa ka nandefa ny fantsony manokana avy am-pelatanan'ny Pixel 3 izy, toy ny efa re tato ho ato.
Samsung dia manangona vola be amin'ny dokam-barotra, zavatra izay tsy misy orinasa hafa, izay mamela ny rafi-piasan'ny smartwatch an'i Google ho lasa safidy tena fanta-daza eo amin'ny tsena ary hialana amin'ny ostracism izay nametrahan'i Google ny rafitra ity.
Wear OS dia nahazo fanovana anarana iray ihany satria izy no hany zava-baovao tao anatin'ny herintaona sy tapany mahery. Raha tsy afaka mamonjy ny sehatra finday an'i Google i Samsung Ho an'ny fitaovana azo ampiasaina, dia tsy mino aho fa misy mahavita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Samsung Gear S4 dia hitantana amin'ny OS OS fa tsy amin'ny Tizen
Ny Essential Phone 2 dia nofoanana mandrakizay
Samsung dia nasaina nandoa 539 tapitrisa dolara handika an'i Apple